Shwe Khit - Page 288 of 302 - Media and Entertainment
(၁) မကျြခုံး၂ခု နီးစပျနလြှေငျရဲစှမျး သတ်တိ ပွညျ့ဝ စပွေီး ၊ ဖွတျထိုးဉာဏျ ကောငျးသူဖွဈလသေညျ…
(၂) မကျြခုံး ထူနလြှေငျအလုပျလုပျရာတှငျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ စူးစူးစိုကျစိုကျ လုပျတကျပါသညျ…
(၃) မကျြခုံးနှဈခုသညျ တခုနှငျ့ တခု ဝေးကှာနလြှေငျသွဇာတိက်ကမ ကွီးမားသူ ဖွဈပါသညျ….
(၄) မကျြခုံးပါးလြှငျ ဟိုဟာ အလိုမကြ ၊ဒီဟာ အလိုမကြ နှငျ့ ခြေးမြားတကျသညျ၊ ဇီဇာကွောငျသောသူ ဖွဈပါသညျ…
(၅) မကျြခုံးအစှနျးမြား အောကျသို့ နိမျ့ကနြလြှေငျ စိတျဆိုး စိတျကောကျ လှယျသူ ဖွဈသညျ…
(၅) မကျြခုံးတို့ဖွောငျ့တနျး နလြှေငျ သတိ ဝိရိယ ရှိ၍ ၊ ရဲရငျ့ တညျကွညျသော ဖွဈသညျ…
(၇) မကျြခုံး အစှနျးမြားအပျေါသို့ တကျနလြှေငျ ကွီးပှားလိုစိတျမြား ပွငျးပွ၍ ၊ ခမျြးသာခငျြသောသူ ဖွဈသညျ…
(၈) မကျြခုံးမြား ကှေးကောကျနလြှေငျ အရာရာကို သိလို တကျလို၍၊ နရောတကာ စပျစုတကျသူဖွဈမညျ…
(၉) မကျြခုံး ပေါငျးကူး(သို့) မကျြခုံး နှဈခု ထိဆကျ နလြှေငျ စိတျကူး စိတျသနျးကောငျး၍ ၊ တီထှငျကွံဆလိုသော စိတျမြားရှိမညျ…
ယောကျြားလေးဖွဈဖွဈ မိနျးကလေးဖွဈဖွဈ မိမိခဈြသူ ခငျမငျသူမြားကို မကျြခုံးကွညျ့ပွီး အကဲခတျနိုငျပါသညျ
(၁) မျက်ခုံး၂ခု နီးစပ်နေလျှင်ရဲစွမ်း သတ္တိ ပြည့်ဝ စေပြီး ၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်းသူဖြစ်လေသည်…
(၂) မျက်ခုံး ထူနေလျှင်အလုပ်လုပ်ရာတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တက်ပါသည်…
(၃) မျက်ခုံးနှစ်ခုသည် တခုနှင့် တခု ဝေးကွာနေလျှင်သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားသူ ဖြစ်ပါသည်….
(၄) မျက်ခုံးပါးလျှင် ဟိုဟာ အလိုမကျ ၊ဒီဟာ အလိုမကျ နှင့် ချေးများတက်သည်၊ ဇီဇာကြောင်သောသူ ဖြစ်ပါသည်…
(၅) မျက်ခုံးအစွန်းများ အောက်သို့ နိမ့်ကျနေလျှင် စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် လွယ်သူ ဖြစ်သည်…
(၅) မျက်ခုံးတို့ဖြောင့်တန်း နေလျှင် သတိ ဝိရိယ ရှိ၍ ၊ ရဲရင့် တည်ကြည်သော ဖြစ်သည်…
(၇) မျက်ခုံး အစွန်းများအပေါ်သို့ တက်နေလျှင် ကြီးပွားလိုစိတ်များ ပြင်းပြ၍ ၊ ချမ်းသာချင်သောသူ ဖြစ်သည်…
(၈) မျက်ခုံးများ ကွေးကောက်နေလျှင် အရာရာကို သိလို တက်လို၍၊ နေရာတကာ စပ်စုတက်သူဖြစ်မည်…
(၉) မျက်ခုံး ပေါင်းကူး(သို့) မျက်ခုံး နှစ်ခု ထိဆက် နေလျှင် စိတ်ကူး စိတ်သန်းကောင်း၍ ၊ တီထွင်ကြံဆလိုသော စိတ်များရှိမည်…
ယောကျာ်းလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် မိမိချစ်သူ ခင်မင်သူများကို မျက်ခုံးကြည့်ပြီး အကဲခတ်နိုင်ပါသည်
အမြိုးသမီးမြား၏ ရယျစရာကောငျးသော အလအေ့ထလေးမြား
၁။ ကြှနျမတို့အမြိုးသမီးတှကေ နိုးစကျပေးရငျ လိုတာထကျပိုပွီး (၁၀)မိနဈစောပေးလရှေိ့ကွတယျ။ (၁၀)မိနဈစောပေးတာကလညျး နိုးစကျမွညျရငျ ပွနျပိတျပွီး (၁၀)မိနဈအိပျဖို့လေ။
၂။ ကြှနျမတို့ မကျြတောငျကော့တဲ့အခါ ပါးစပျကသူ့အလိုလိုပှငျ့လာပါတယျ။ ဒီလို mood ထညျ့ပွီးပါးစပျဟောငျးလောငျးနဲ့ မကျြတောငျကော့နတေော့လညျး ကိုယျ့ပုံကရယျစရာကောငျးနပွေနျရော။ ဒါနဲ့ပှငျ့နတေဲ့ပါးစပျကလေးကို အာရုံစိုကျပွီးပွနျပိတျလိုကျတဲ့အခါ မကျြတောငျကော့ဆေးတှေ ပှကုနျပါလရေော။
၃။ အမြိုးသမီးတှကေဖုနျးဆိုရငျ လကျကိုငျအိပျထဲပဈထညျ့လိုကျတာပဲ။ ဖုနျးသံမွညျလာပွီဆိုတဲ့အခါမှ ပြာယာတှခေပျပွီး လကျကိုငျအိပျကွီးထဲ မှနှေောကျရှာဖှပေါတော့တယျ။
၄။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ လကျကိုငျအိတျထဲကိုဖှငျ့ကွညျ့ရငျ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးမြားစှာ ထညျ့ထားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒါတှကေိုအလေးခံပွီးထညျ့ထားတာ အသုံးလိုလို့လားဆိုတော့လညျးမဟုတျပါဘူး။ တဈခြိနျကရြငျ အသုံးမြားဝငျမလားဆိုပွီးထညျ့ထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
၅။ အမြိုးသမီးတှကေထားတတျသိုတတျတဲ့နရောမှာအလှနျကြှမျးကငျြကွပါတယျ။ ခကျတာကထားတဲ့နရောကိုမနေ့ခွေငျးပါပဲ။
၆။ မကျြမှနျကိုခေါငျးပျေါတငျထားပွီး မကျြမှနျပြောကျလို့ လိုကျရှာနတေတျတာအမြိုးသမီးတှပေါပဲ။ ဤဆောငျးပါးကို ဂန်တဝငျ မဂ်ဂဇငျးမှ ရေးသားတငျဆကျခွငျး ဖွဈသညျ။
၇။ မှနျကွညျ့တဲ့အခြိနျအခါတိုငျး စဉျးစားနမေိတတျကွတာကတော့ ဒီလိုမကျြနှာပုံစံအနအေထားလေးနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျရငျ သိပျလှမှာပဲတဲ့။
၈။ လောလောလောလောနဲ့ သော့ကိုကောကျကိုငျပွီး ကိုငျထားတဲ့သော့ကို ပြောကျတယျထငျပွီး လိုကျရှာနတေတျတာဟာလညျး အမြိုးသမီးတှပေါ။
၉။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ရခြေိုးခနျးတိုငျးမှာတူတဲ့အခကျြကလေးတဈခုရှိတယျ။ အဲဒါကတော့ ခေါငျးလြှျောရညျ နဲ့ ကှနျဒီရှငျနာ (conditioner) ကိုတံဆိပျနှဈမြိုးသုံးမြိုးဝယျထားကွတာပါပဲ။
၁၀။ အမြိုးသမီးတှကေအိမျပွငျထှကျတော့မယျဆိုတာနဲ့ အပွေးအလှားမှနျသှားကွညျ့ရပါတယျ။
၁၁။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အဝတျဘီရိုထဲကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ အဝတျအစားမြားစှာနဲ့ ပွညျ့နကျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပွငျထှကျတော့မယျဆိုရငျ ဝတျစရာရှာမတှကွေ့ပါဘူး။
၁၂။ အမြိုးသမီးတှေ အလှကွိုကျခကျြကတော့ အိပျယာမဝငျခငျ ခေါငျးဖွီးလိုကျပါသေးတယျ။
၁၃။ အမြိုးသမီးတှေ သနျ့စငျခနျးသှားမယျဆိုရငျ အဖျောစပျပွီးတူတူသှားကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ အတငျးလေးဘာလေးပွောရအောငျလို့ပေါ့။
၁၄။ အမြိုးသမီးတှအေတှကျတော့ ဘီယာတှအေားလုံးကအရသာတူတူပါပဲ။
၁၅။ အမြိုးသမီးတှကေအိမျနားကဈေးဆိုငျကိုသှားတာဖွဈဖွဈ၊ အမှိုကျပွဈတာပဲဖွဈဖွဈ အိမျပွငျထှကျပွီဆိုတာနဲ့အလှပွငျ၊ မိတျကပျလိမျးပွီးမှ ထှကျလရှေိ့ပါတယျ။
၁၆။ အမြိုးသမီးတှကေသူ့ခဈြသူကို “ရပါတယျ” “အဆငျပွပေါတယျ” “ဘာမှမဖွဈပါဘူး” စသဖွငျ့ပွောလာတယျဆိုရငျ အမှနျတကယျကတဈခုခုဖွဈနလေို့ပါပဲ။
၁၇။ ကြှနျမတို့တှကေခရီးတဈခုသှားရငျ ရှညျရှညျဝေးဝေးကှဝေို့ကျပွီးသှားတတျကွတယျ။ နီးနီးနားလမျးတှေ၊ ဖွတျလမျးတှကေနသှေားရမှာမဝံ့ရဲလို့ပါ။
၁၈။ ကြှနျမတို့တှကေကိုယျခဈြတဲ့လူကို ကိုယျငိုနတောမွငျစခေငျြကွပွီး ကိုယျ့ကိုထှေးပှထေ့ားစခေငျြပါတယျ။
၁၉။ ဖြျောဖွရေေးအစီအစဉျတှကွေညျ့ပွီး အမြိုးသားတှကေ လကျတှဘေ့ဝပငျပနျးတာတှကေနေ ခဏတာလှတျမွောကျဖို့ အပနျးဖွကွေပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှကေတော့ ဒီဖြျောဖွရေေးတှထေဲမှာ လကျတှကေို့ယျ့ဘဝနဲ့တိုကျဆိုငျတာတှကေို ရှာဖှပွေီးခံစားတတျကွပါတယျ။
၂၀။ ကြှနျမတို့အမြိုးသမီးတှအေားလုံးကပိုးကောငျ၊ ပငျ့ကူ။ ပိုးဟပျနဲ့ ကွှကျတှကေိုကွောကျကွပါတယျ။
၂၁။ အမြိုးသမီးတှကေ (၃)ရကျကွာမယျ့ ခရီးတဈခုအတှကျ အဝတျအစား (၇)စုံ ပွငျဆငျလရှေိ့ပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဘာဝတျရမလဲဆိုတာစဉျးစားရှေးခယျြရအောငျလို့ပါ။
အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ရယျစရာကောငျးတဲ့ အလအေ့ထလေးတှကေို ကွိုကျနှဈသကျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ အားလုံးရယျမောနိုငျလိမျ့မယျလို့လညျးမြှျောလငျ့ပါတယျ။အမြိုးသမီးတှရေဲ့ရယျစရာအပွုအမူတှကေိုအောကျဖျောပွပါ comment section ကနလှေတျလပျစှာ မြှဝနေိုငျပါတယျ။
အတှေးအချေါမြားကို မြှဝပေေးတယျဆိုတာ ဂရုစိုကျလို့ပါပဲ။ အောကျပါ Facebook SHARE button လေးကို တဈခကျြနှိပျပွီး သူငယျခငျြးတှကေို ဘယျလောကျဂရုစိုကျတယျဆိုတာ ဖျောပွလိုကျပါ။ LIKE လုပျရနျလညျးမမေ.ပါနဲ.နျော။
၁။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေက နိုးစက်ပေးရင် လိုတာထက်ပိုပြီး (၁၀)မိနစ်စောပေးလေ့ရှိကြတယ်။ (၁၀)မိနစ်စောပေးတာကလည်း နိုးစက်မြည်ရင် ပြန်ပိတ်ပြီး (၁၀)မိနစ်အိပ်ဖို့လေ။
၂။ ကျွန်မတို့ မျက်တောင်ကော့တဲ့အခါ ပါးစပ်ကသူ့အလိုလိုပွင့်လာပါတယ်။ ဒီလို mood ထည့်ပြီးပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မျက်တောင်ကော့နေတော့လည်း ကိုယ့်ပုံကရယ်စရာကောင်းနေပြန်ရော။ ဒါနဲ့ပွင့်နေတဲ့ပါးစပ်ကလေးကို အာရုံစိုက်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေ ပွကုန်ပါလေရော။
၃။ အမျိုးသမီးတွေကဖုန်းဆိုရင် လက်ကိုင်အိပ်ထဲပစ်ထည့်လိုက်တာပဲ။ ဖုန်းသံမြည်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှ ပျာယာတွေခပ်ပြီး လက်ကိုင်အိပ်ကြီးထဲ မွှေနှောက်ရှာဖွေပါတော့တယ်။
၄။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ထဲကိုဖွင့်ကြည့်ရင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစွာ ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါတွေကိုအလေးခံပြီးထည့်ထားတာ အသုံးလိုလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်ကျရင် အသုံးများဝင်မလားဆိုပြီးထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အမျိုးသမီးတွေကထားတတ်သိုတတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ခက်တာကထားတဲ့နေရာကိုမေ့နေခြင်းပါပဲ။
၆။ မျက်မှန်ကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားပြီး မျက်မှန်ပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတတ်တာအမျိုးသမီးတွေပါပဲ။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၇။ မှန်ကြည့်တဲ့အချိန်အခါတိုင်း စဉ်းစားနေမိတတ်ကြတာကတော့ ဒီလိုမျက်နှာပုံစံအနေအထားလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် သိပ်လှမှာပဲတဲ့။
၈။ လောလောလောလောနဲ့ သော့ကိုကောက်ကိုင်ပြီး ကိုင်ထားတဲ့သော့ကို ပျောက်တယ်ထင်ပြီး လိုက်ရှာနေတတ်တာဟာလည်း အမျိုးသမီးတွေပါ။
၉။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရေချိုးခန်းတိုင်းမှာတူတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ခေါင်းလျှော်ရည် နဲ့ ကွန်ဒီရှင်နာ (conditioner) ကိုတံဆိပ်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးဝယ်ထားကြတာပါပဲ။
၁၀။ အမျိုးသမီးတွေကအိမ်ပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ အပြေးအလွှားမှန်သွားကြည့်ရပါတယ်။
၁၁။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဝတ်ဘီရိုထဲကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဝတ်အစားများစွာနဲ့ ပြည့်နက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် ဝတ်စရာရှာမတွေ့ကြပါဘူး။
၁၂။ အမျိုးသမီးတွေ အလှကြိုက်ချက်ကတော့ အိပ်ယာမဝင်ခင် ခေါင်းဖြီးလိုက်ပါသေးတယ်။
၁၃။ အမျိုးသမီးတွေ သန့်စင်ခန်းသွားမယ်ဆိုရင် အဖော်စပ်ပြီးတူတူသွားကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အတင်းလေးဘာလေးပြောရအောင်လို့ပေါ့။
၁၄။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ဘီယာတွေအားလုံးကအရသာတူတူပါပဲ။
၁၅။ အမျိုးသမီးတွေကအိမ်နားကဈေးဆိုင်ကိုသွားတာဖြစ်ဖြစ်၊ အမှိုက်ပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ပြင်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့အလှပြင်၊ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးမှ ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။
၁၆။ အမျိုးသမီးတွေကသူ့ချစ်သူကို “ရပါတယ်” “အဆင်ပြေပါတယ်” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” စသဖြင့်ပြောလာတယ်ဆိုရင် အမှန်တကယ်ကတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
၁၇။ ကျွန်မတို့တွေကခရီးတစ်ခုသွားရင် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကွေ့ဝိုက်ပြီးသွားတတ်ကြတယ်။ နီးနီးနားလမ်းတွေ၊ ဖြတ်လမ်းတွေကနေသွားရမှာမဝံ့ရဲလို့ပါ။
၁၈။ ကျွန်မတို့တွေကကိုယ်ချစ်တဲ့လူကို ကိုယ်ငိုနေတာမြင်စေချင်ကြပြီး ကိုယ့်ကိုထွေးပွေ့ထားစေချင်ပါတယ်။
၁၉။ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ပြီး အမျိုးသားတွေက လက်တွေ့ဘဝပင်ပန်းတာတွေကနေ ခဏတာလွတ်မြောက်ဖို့ အပန်းဖြေကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ဒီဖျော်ဖြေရေးတွေထဲမှာ လက်တွေ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့တိုက်ဆိုင်တာတွေကို ရှာဖွေပြီးခံစားတတ်ကြပါတယ်။
၂၀။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကပိုးကောင်၊ ပင့်ကူ။ ပိုးဟပ်နဲ့ ကြွက်တွေကိုကြောက်ကြပါတယ်။
၂၁။ အမျိုးသမီးတွေက (၃)ရက်ကြာမယ့် ခရီးတစ်ခုအတွက် အဝတ်အစား (၇)စုံ ပြင်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရွေးချယ်ရအောင်လို့ပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးရယ်မောနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရယ်စရာအပြုအမူတွေကိုအောက်ဖော်ပြပါ comment section ကနေလွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
အောငျမွငျကြျောကွားသူ မြားရဲ့ အသကျ ၂ဝ အရှယျမှာ ဘာတှေ လုပျနခေဲ့လဲဆိုတဲ့ အကွောငျး အတုယူ မှတျသားဖှယျရာမြား
အရှယျကောငျးခြိနျ၊ ငယျရှယျနုပြိုခြိနျမှာ ကွိုးစားရုနျးကနျပါတဲ့…
အသကျ၂ဝဆိုတဲ့အရှယျဟာ ကွီးပွငျးပွီလား၊ အသကျ၂ဝဆိုတဲ့အရှယျဟာ စိတျကူးအိပျမကျနဲ့ ဘယျလောကျဝေးနသေေးလဲ၊
အောငျမွငျထငျရှားသူတို့ရဲ့ အသကျ၂ဝအရှယျကို ပွနျကွညျ့ကွညျ့ကွရအောငျ၊ အဲဒီအရှယျမှာ သူတို့ရဲ့စိတျကူးအိပျမကျနဲ့ သူတို့ဘယျလောကျဝေးနခေဲ့သေးလဲ…
အသကျ၂ဝအရှယျ အိုဘားမား (အမရေိကနျသမ်မတ)
အဲဒီအရှယျမှာ အိုဘားမားဟာ ဆေးလိပျအရကျသောကျရငျး ဦးနှောကျခွောကျစရာတှကေို မပေ့ဈအောငျကွိုးစားခဲ့တယျ။
၁၉၈၃ခုနှဈ ၂၂နှဈအရှယျအိုဘားမားဟာ ကိုလံဘီယာတက်ကသိုလျကနေ နိုငျငံရေးသိပ်ပံနဲ့ကြောငျးပွီးခဲ့တယျ။ အဲဒီမတိုငျခငျမှာတော့ သူဟာ လူမြိုးစုံသှေးနှောတဲ့နောကျခံကွောငျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့အသိအမှတျပွုမှုကို အလှယျတကူမရခဲ့လို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုသိမျငယျခဲ့တယျ။ အဓိပ်ပာယျမဲ့တဲ့နရေ့ကျတှကေို သူဖွတျသနျးခဲ့ဖူးတယျ။ ဥပမာ- ကြောငျးလဈတယျ၊ အရကျသောကျတယျ၊ ဆေးလိပျသောကျတယျ၊ ဆနျ့ကငျြပုနျကနျတဲ့ လူငယျတဈဦးလုံးလုံးဖွဈခဲ့တယျ။
အတိတျကိုပွနျပွောငျးအောငျးမတေို့ငျး အိုဘားမားက “အဲဒီအလုပျကို လုပျခဲ့တာဟာ “ငါဘယျသူလဲ”ဆိုတဲ့ပွဿနာကို ခေါငျးထဲကနညှေဈထုတျတာပဲ” လို့ဆိုတယျ။ ၁နှဈအကွာမှာ အိုဘားမားဟာ ခြီကာဂိုကိုသှားပွီး လူမှုအဖှဲ့အစညျးမှာပါဝငျအလုပျလုပျခဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျ ဟားဗတျတက်ကသိုလျမှာ ဥပဒပေညာကိုလလေ့ာသငျယူခဲ့တယျ။
အသကျ၂ဝအရှယျ ပူတငျ (ရုရှားသမ်မတ)
လူငယျလူရှယျခြိနျခါမှာ ပူတငျလညျး ဆုံးဖွတျခကျြတှဝေခေဲ့ဖူးတယျ။ သူ့ရဲ့ဂြူဒိုသငျတနျးဆရာက သူ့ကို ပိုကောငျးတဲ့အတတျပညာကြောငျးမှာ ဂြူဒိုပညာကို ဆကျလကျဆညျးပူးသငျယူစခေငျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ပူတငျက တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ဖွဖေို့၊ စာမေးပှဲမအောငျခဲ့ရငျ စဈထဲဝငျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ။ ၁၉၇၁ ခုနှဈ ၁၉နှဈအရှယျမှာ ပူတငျဟာ (ယခု) Saint Petersburg State တက်ကသိုလျမှာ ဥပဒပေညာကို လလေ့ာသငျယူခဲ့တယျ။
“ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ဘဝရဲ့ အရေးကွီးဆုံးကာလတဈခုပေါ့။ ကြှနျတေျာ့ကို ပွတျသားတဲ့ရှေးခယျြမှုတဈခု ပွုလုပျစခေဲ့တယျ။ ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ကိုယျ ကိုယျမြှျောမှနျးတဲ့ လူ့ဘဝခရီးသဈကိုစမလား၊ ဒါမှမဟုတျ အရှုံးပေးပွီး ကိုယျ့ရညျမှနျးခကျြတှပေကျြပွား တခွားလူစီမံတာကိုပဲ နာခံမလားပေါ့” လို့ ပူတငျက အတိတျကိုပွနျပွောငျးရငျး ပွောခဲ့ပါတယျ။
အသကျ၂ဝအရှယျ ရှီကငျြ့ဖငျြ (တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ)
ပညာရှာတဲ့ လူငယျအယောကျတဈသောငျးကြျောလောကျနဲ့ လယျထဲဆငျးအလုပျလုပျနခေဲ့တယျ။
ရှီကငျြ့ဖငျြရဲ့ ငယျရှယျခြိနျတျောတျောမြားမြားဟာ လယျတောယာတောထဲမှာပဲ ကုနျဆုံးခဲ့တယျ။ ၁၉၆၉ခုနှဈ အသကျ ၁၆နှဈအရှယျ ရှီကငျြ့ဖငျြဟာ ပညာရှာတဲ့ လူငယျအယောကျတဈသောငျးကြျောလောကျနဲ့ တောရှာဖကျတာဝနျထမျးဖို့ စလှေတျခံခဲ့ရတယျ။ စစခငျြးမှာ တခွားလူတှေ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျခဲ့ကွဘူး။ ရှီကငျြ့ဖငျြကတော့ ပငျပနျးဒဏျကိုခံနိုငျရညျရှိခဲ့တယျ။ လယျသမားတှနေဲ့အတူ မွတှေတေူးခဲ့ရတယျ။ လယျထဲဆငျးခဲ့ရတယျ။ ပွညျသူတှကေ သူ့ကိုထငျမွငျခကျြကောငျးတှေ ပေးခဲ့ကွတယျ။ အသကျ ၂၂နှဈအရှယျကမြှ ပကေငျြးမှာတက်ကသိုလျတကျဖို့ အကွံပွုထောကျခံခကျြရခဲ့တယျ။
အသကျ၂ဝအရှယျ အိုငျးစတိုငျး (သိပ်ပံပညာရှငျ)
အလုပျရှာမရခဲ့လို့ နအေိမျမှာစာလိုကျသငျတဲ့အလုပျနဲ့ အသကျမှေးခဲ့ရတယျ။
၁၉ဝဝခုနှဈ ၂၁နှဈအရှယျအိုငျးစတိုငျးဟာ ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) ကနေ ကြောငျးပွီးခဲ့တယျ။ သူဟာ တဈခြို့ဘာသာရပျမှာ စိတျဝငျစားမှုမရှိခဲ့လို့၊ ဆရာတှအေပျေါ ပြူပြူငှာငှာမဆကျဆံခဲ့လို့ ကြောငျးဆကျတကျဖို့ ငွငျးဆနျခံခဲ့ရတယျ။ ကြောငျးပွီးပွီနောကျ သူအလုပျရှာမရခဲ့ဘူး။ နအေိမျမှာစာလိုကျသငျတဲ့အလုပျ၊ အစားထိုးဆရာအလုပျနဲ့ပဲ အသကျမှေးဝမျးခဲ့ရပါတယျ။ ၁၉ဝ၂ခုနှဈမှာ ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးရဲ့ဖခငျ အကူအညီနဲ့ ဆှဈဇာလနျဗဟိုအစိုးရမှတျပုံတငျမူပိုငျခှငျ့ရုံးမှာ အလုပျရခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂ဝအရှယျ မာရငျ (ဂကျြမာ)
အထကျတနျးစာမေးပှဲကို ၃ကွိမျတိုငျဖွဆေိုပွီးမှ တက်ကသိုလျဝငျတနျးကိုအောငျမွငျခဲ့တယျ။
၁၉၈၄ခုနှဈမှာ အထကျတနျးစာမေးပှဲကို ၃ကွိမျမွောကျ မာရငျဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ တက်ကသိုလျတဈခုက လကျမခံခငျြ ခံခငျြနဲ့ သူ့ကိုလကျခံခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၈၈ခုနှဈ ကြောငျးပွီးတော့ လြှပျစဈနညျးပညာကောလိပျတဈခုမှာ သူကြောငျးဆရာလုပျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၅ခုနှဈ အသကျ ၃၁နှဈရောကျမှ မာရငျဟာ အမရေိကနျကိုအမှတျမထငျရောကျခဲ့ရာက မိတျဆှတေဈဦးရဲ့မိတျဆကျပေးမှုနဲ့ အငျတာနကျကို စတငျသိရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၂ဝအရှယျ Mark Zuckerberg
အဆောငျမှာနရေငျး Facebookကို စဖနျတီးခဲ့တယျ။
၂ဝဝ၄ခုနှဈ ၂ဝအရှယျမတျချမှာ ဟားဗတျတက်ကသိုလျရဲ့ဒုတိယနှဈကြောငျးသားတဈဦးဖွဈတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ပရိုဂရမျတဈခုကို သူစတငျရေးဆှဲခဲ့တယျ။ သူ့အဆောငျနသေူငယျခငျြးရဲ့ ပွောပွခကျြအရ “ဝကျဆိုကျဒျတဈခုကို သူစတငျဖနျတီးခဲ့တယျ။ အဲဒီဝကျဆိုဒျမှာ ယောကျြားမိနျးမဓာတျပုံတဈပုံစီတငျခဲ့တယျ။ ဘယျပုံ အဟော့ဆုံးလညျးဆိုတာကို ကွညျ့ရှုသူကရှေးလို့ရတယျ။ ပွီးတော့ ဘယျသူမဲအမြားဆုံးလညျး ရှေးကွတာပေါ့” လို့ဆိုတယျ။ လူအမြားရဲ့ထောကျခံမှုကိုရပွီးနောကျ မတျချဟာ သူငယျခငျြးနှဈယောကျနဲ့အတူ အခြိနျတဈပတျလောကျအသုံးပွုပွီး ဟားဗတျကြောငျးသားတို့ရဲ့ ဆကျသှယျမှုကှနျရကျအဖွဈ Facebook ကိုတညျထောကျလိုကျတယျ။
အသကျ ၂ဝအရှယျ Audrey Hepburn
၁၉၄၈ခုနှဈ ၁၉နှဈအရှယျ Audreyဟာ နာမညျကွီးဘဲလေးအကကြောငျးတဈကြောငျးမှာ ဘဲလေးအကကို သငျယူခဲ့တယျ။ သူဟာ ကြောငျးလခမတတျနိုငျလို့ ဟျောလနျကိုပွနျသှားရတဲ့အခါလညျး ရှိခဲ့တယျ။ ဘဲလေးအကကို လအနညျးငယျသငျယူပွီးတဲ့နောကျ ဘဲလေးအကနဲ့ မသငျ့တျောဘူးလို့ သတိပေးခံခဲ့ရတယျ။ နအေိမျစီးပှားရေးကပျြတညျးမှုကွောငျ့ Audreyဟာ အခြိနျပိုငျးမျောဒယျတဈဦးလုပျခဲ့ရတယျ။ အကဝိုငျးတဈခြို့နဲ့ ကပွဖြျောဖွခေဲ့ရတယျ။ အသကျ ၂ဝအရှယျမှာ ဇာတျရံသရုပျဆောငျအဖွဈနဲ့ ရုပျရှငျတဈခြို့မှာ သူပါဝငျခှငျ့ရခဲ့တယျ။
အသကျ၂ဝအရှယျ Leo Tolstoy (ရုရှားဂန်တဝငျစာရေးဆရာ)
အေးအေးသကျသာတဲ့ဘဝကို ငွီးငှလေို့ စဈထဲဝငျခဲ့တယျ။
လီယိုတျောစတှိုငျးကို ရုရှားအထကျတနျးစားမိသားစုတဈစုက မှေးဖှားခဲ့တယျ။ ၁၆နှဈအရှယျမှာ Kazan တက်ကသိုလျကို ဝငျရောကျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီတက်ကသိုလျရဲ့ လှနေံဓားထဈသငျယူမှုမှာ သူငွီးငှခေဲ့တယျ။ ၁၈၄၇ခုနှဈ ၁၉နှဈအရှယျမှာ တျောစတှိုငျးဟာ သူ့နအေိမျ Yasnaya Polyana ခွံကွီးထဲ (အခုတော့ ပွတိုကျအဖွဈထားရှိ) ပွနျလာခဲ့ပွီး ခွံမှာအလုပျလုပျကိုငျရငျး ကြောငျးစာလလေ့ာသငျယူမှုတှကေို ကိုယျတိုငျစီစဉျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အလုပျနှဈခုလုံး သူအောငျမွငျမှုမရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မျောစကို၊ St. Petersburg လူ့အသိုငျးအဝိုငျးထဲ သူရောကျသှားခဲ့ပွနျတယျ။
ဒါပမေယျ့ အေးအေးသကျသာတဲ့ဘဝကို ငွီးငှခေဲ့လို့ ၁၈၅၁ခုနှဈမှာ အဈကိုနဲ့အတူ Caucasus ကိုသှားရောကျပွီး စဈထဲဝငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျး စာရေးဖို့ သူစတငျကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ သူ့ဘဝ သူ့အပွုအမူတှကေို စတငျစိစဈသုံးသပျခဲ့တယျ။ စဈထဲဝငျပွီး နောကျတဈနှဈမှာပဲ စဈပှဲတဈပှဲထဲသူပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ စဈပှဲမှာ တိုကျရညျခိုကျရညျကောငျးခဲ့သလို သူရဲ့ပထမဆုံးစာအုပျဖွဈတဲ့ Childhood (ကလေးဘဝ)အမညျရဝတ်ထုကို ရေးသားထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂ဝအရှယျ မေျာ့ရငျ
(စာပနေိုဘယျလျဆုရ တရုတျစာရေးဆရာ Mo Yan)
၁၉၇၅ခုနှဈ ၂ဝအရှယျမေျာ့ရငျဟာ ဝါစကျရုံမှာယာယီလုပျသားအဖွဈ လုပျကိုငျခဲ့တယျ။ အလုပျစလုပျခြိနျမှာ အတနျးပညာလိမျညာစာရငျးသှငျးခဲ့တယျ။ အလယျတနျးအောငျလို့ဆိုခဲ့ပမေယျ့ ရှာနားနီးခငျြးတဈဦးက အဖွဈမှနျကိုသိသှားခဲ့လို့ သူခေါငျးမမော့နိုငျအောငျဖွဈခဲ့ရတယျ။
၁၉၇၆ခုနှဈမှာ စဈထဲ မေျာ့ရငျဝငျခဲ့ပွီး စာတှကေိုစတငျရေးသားခဲ့တယျ။ ၁၉၈၄ခုနှဈ ၂၉နှဈအရှယျမှာ ပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောအနုပညာကြောငျးကို ဝငျခှငျ့ရခဲ့ပွီးနောကျ စာပလေောကထဲ ဝငျရောကျခဲ့တယျ။
အသကျ ၂ဝအရှယျမှာ သူတို့ဟာ ဘယျလို စိတျရှုပျထှေးမှု၊ အခကျအခဲ၊ ဆငျးရဲပငျပနျးခွငျးတှရှေိခဲ့ပါစေ၊ စိတျကူးအိပျမကျနဲ့ ဝေးခဲ့ပါစေ သူတို့ရဲ့ကွိုးစားမှု၊ ဇှဲလုံ့လရှိမှုနဲ့ ဒီကနရေဲ့အောငျမွငျမှုကို သူတို့ဆှတျခူးခဲ့ကွတယျ။ ကြှနျမတို့လူတိုငျးမှာလညျး စိတျကူးအိပျမကျက ရှိသငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့မြား အဲဒီအိပျမကျကို မတျောမဆ အကောငျအထညျဖျောဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျတော့…..
နိုငျးနိုငျးစနေ (April. 21. 2016)
အရွယ်ကောင်းချိန်၊ ငယ်ရွယ်နုပျိုချိန်မှာ ကြိုးစားရုန်းကန်ပါတဲ့…
အသက်၂ဝဆိုတဲ့အရွယ်ဟာ ကြီးပြင်းပြီလား၊ အသက်၂ဝဆိုတဲ့အရွယ်ဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးနေသေးလဲ၊
အောင်မြင်ထင်ရှားသူတို့ရဲ့ အသက်၂ဝအရွယ်ကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်၊ အဲဒီအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ သူတို့ဘယ်လောက်ဝေးနေခဲ့သေးလဲ…
အသက်၂ဝအရွယ် အိုဘားမား (အမေရိကန်သမ္မတ)
အဲဒီအရွယ်မှာ အိုဘားမားဟာ ဆေးလိပ်အရက်သောက်ရင်း ဦးနှောက်ခြောက်စရာတွေကို မေ့ပစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
၁၉၈၃ခုနှစ် ၂၂နှစ်အရွယ်အိုဘားမားဟာ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကနေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့တယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ သူဟာ လူမျိုးစုံသွေးနှောတဲ့နောက်ခံကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကို အလွယ်တကူမရခဲ့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ်ငယ်ခဲ့တယ်။ အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကို သူဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ်။ ဥပမာ- ကျောင်းလစ်တယ်၊ အရက်သောက်တယ်၊ ဆေးလိပ်သောက်တယ်၊ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်းမေ့တိုင်း အိုဘားမားက “အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာဟာ “ငါဘယ်သူလဲ”ဆိုတဲ့ပြဿနာကို ခေါင်းထဲကနေညှစ်ထုတ်တာပဲ” လို့ဆိုတယ်။ ၁နှစ်အကြာမှာ အိုဘားမားဟာ ချီကာဂိုကိုသွားပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေပညာကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။
အသက်၂ဝအရွယ် ပူတင် (ရုရှားသမ္မတ)
လူငယ်လူရွယ်ချိန်ခါမှာ ပူတင်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ရဲ့ဂျူဒိုသင်တန်းဆရာက သူ့ကို ပိုကောင်းတဲ့အတတ်ပညာကျောင်းမှာ ဂျူဒိုပညာကို ဆက်လက်ဆည်းပူးသင်ယူစေချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပူတင်က တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေဖို့၊ စာမေးပွဲမအောင်ခဲ့ရင် စစ်ထဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ပူတင်ဟာ (ယခု) Saint Petersburg State တက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေပညာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။
“ဒါဟာ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်တော့်ကို ပြတ်သားတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်စေခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် ကိုယ်မျှော်မှန်းတဲ့ လူ့ဘဝခရီးသစ်ကိုစမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရှုံးပေးပြီး ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေပျက်ပြား တခြားလူစီမံတာကိုပဲ နာခံမလားပေါ့” လို့ ပူတင်က အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းရင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အသက်၂ဝအရွယ် ရှီကျင့်ဖျင် (တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ)
ပညာရှာတဲ့ လူငယ်အယောက်တစ်သောင်းကျော်လောက်နဲ့ လယ်ထဲဆင်းအလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်။
ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ငယ်ရွယ်ချိန်တော်တော်များများဟာ လယ်တောယာတောထဲမှာပဲ ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ၁၉၆၉ခုနှစ် အသက် ၁၆နှစ်အရွယ် ရှီကျင့်ဖျင်ဟာ ပညာရှာတဲ့ လူငယ်အယောက်တစ်သောင်းကျော်လောက်နဲ့ တောရွာဖက်တာဝန်ထမ်းဖို့ စေလွှတ်ခံခဲ့ရတယ်။ စစချင်းမှာ တခြားလူတွေ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ရှီကျင့်ဖျင်ကတော့ ပင်ပန်းဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့တယ်။ လယ်သမားတွေနဲ့အတူ မြေတွေတူးခဲ့ရတယ်။ လယ်ထဲဆင်းခဲ့ရတယ်။ ပြည်သူတွေက သူ့ကိုထင်မြင်ချက်ကောင်းတွေ ပေးခဲ့ကြတယ်။ အသက် ၂၂နှစ်အရွယ်ကျမှ ပေကျင်းမှာတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ အကြံပြုထောက်ခံချက်ရခဲ့တယ်။
အသက်၂ဝအရွယ် အိုင်းစတိုင်း (သိပ္ပံပညာရှင်)
အလုပ်ရှာမရခဲ့လို့ နေအိမ်မှာစာလိုက်သင်တဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးခဲ့ရတယ်။
၁၉ဝဝခုနှစ် ၂၁နှစ်အရွယ်အိုင်းစတိုင်းဟာ ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) ကနေ ကျောင်းပြီးခဲ့တယ်။ သူဟာ တစ်ချို့ဘာသာရပ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့လို့၊ ဆရာတွေအပေါ် ပျူပျူငှာငှာမဆက်ဆံခဲ့လို့ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ ငြင်းဆန်ခံခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းပြီးပြီနောက် သူအလုပ်ရှာမရခဲ့ဘူး။ နေအိမ်မှာစာလိုက်သင်တဲ့အလုပ်၊ အစားထိုးဆရာအလုပ်နဲ့ပဲ အသက်မွေးဝမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉ဝ၂ခုနှစ်မှာ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းရဲ့ဖခင် အကူအညီနဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ဗဟိုအစိုးရမှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှာ အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂ဝအရွယ် မာရင် (ဂျက်မာ)
အထက်တန်းစာမေးပွဲကို ၃ကြိမ်တိုင်ဖြေဆိုပြီးမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။
၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ အထက်တန်းစာမေးပွဲကို ၃ကြိမ်မြောက် မာရင်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တက္ကသိုလ်တစ်ခုက လက်မခံချင် ခံချင်နဲ့ သူ့ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် ကျောင်းပြီးတော့ လျှပ်စစ်နည်းပညာကောလိပ်တစ်ခုမှာ သူကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၅ခုနှစ် အသက် ၃၁နှစ်ရောက်မှ မာရင်ဟာ အမေရိကန်ကိုအမှတ်မထင်ရောက်ခဲ့ရာက မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ အင်တာနက်ကို စတင်သိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂ဝအရွယ် Mark Zuckerberg
အဆောင်မှာနေရင်း Facebookကို စဖန်တီးခဲ့တယ်။
၂ဝဝ၄ခုနှစ် ၂ဝအရွယ်မတ်ခ်မှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို သူစတင်ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ သူ့အဆောင်နေသူငယ်ချင်းရဲ့ ပြောပြချက်အရ “ဝက်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုကို သူစတင်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ အဲဒီဝက်ဆိုဒ်မှာ ယောက်ျားမိန်းမဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီတင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်ပုံ အဟော့ဆုံးလည်းဆိုတာကို ကြည့်ရှုသူကရွေးလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်သူမဲအများဆုံးလည်း ရွေးကြတာပေါ့” လို့ဆိုတယ်။ လူအများရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရပြီးနောက် မတ်ခ်ဟာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူ အချိန်တစ်ပတ်လောက်အသုံးပြုပြီး ဟားဗတ်ကျောင်းသားတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်အဖြစ် Facebook ကိုတည်ထောက်လိုက်တယ်။
အသက် ၂ဝအရွယ် Audrey Hepburn
၁၉၄၈ခုနှစ် ၁၉နှစ်အရွယ် Audreyဟာ နာမည်ကြီးဘဲလေးအကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဘဲလေးအကကို သင်ယူခဲ့တယ်။ သူဟာ ကျောင်းလခမတတ်နိုင်လို့ ဟော်လန်ကိုပြန်သွားရတဲ့အခါလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဘဲလေးအကကို လအနည်းငယ်သင်ယူပြီးတဲ့နောက် ဘဲလေးအကနဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့ သတိပေးခံခဲ့ရတယ်။ နေအိမ်စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကြောင့် Audreyဟာ အချိန်ပိုင်းမော်ဒယ်တစ်ဦးလုပ်ခဲ့ရတယ်။ အကဝိုင်းတစ်ချို့နဲ့ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ရတယ်။ အသက် ၂ဝအရွယ်မှာ ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ချို့မှာ သူပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
အသက်၂ဝအရွယ် Leo Tolstoy (ရုရှားဂန္တဝင်စာရေးဆရာ)
အေးအေးသက်သာတဲ့ဘဝကို ငြီးငွေ့လို့ စစ်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။
လီယိုတော်စတွိုင်းကို ရုရှားအထက်တန်းစားမိသားစုတစ်စုက မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ၁၆နှစ်အရွယ်မှာ Kazan တက္ကသိုလ်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ လှေနံဓားထစ်သင်ယူမှုမှာ သူငြီးငွေ့ခဲ့တယ်။ ၁၈၄၇ခုနှစ် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ တော်စတွိုင်းဟာ သူ့နေအိမ် Yasnaya Polyana ခြံကြီးထဲ (အခုတော့ ပြတိုက်အဖြစ်ထားရှိ) ပြန်လာခဲ့ပြီး ခြံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း ကျောင်းစာလေ့လာသင်ယူမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်နှစ်ခုလုံး သူအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မော်စကို၊ St. Petersburg လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲ သူရောက်သွားခဲ့ပြန်တယ်။
ဒါပေမယ့် အေးအေးသက်သာတဲ့ဘဝကို ငြီးငွေ့ခဲ့လို့ ၁၈၅၁ခုနှစ်မှာ အစ်ကိုနဲ့အတူ Caucasus ကိုသွားရောက်ပြီး စစ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း စာရေးဖို့ သူစတင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သူ့ဘဝ သူ့အပြုအမူတွေကို စတင်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့တယ်။ စစ်ထဲဝင်ပြီး နောက်တစ်နှစ်မှာပဲ စစ်ပွဲတစ်ပွဲထဲသူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲမှာ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းခဲ့သလို သူရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Childhood (ကလေးဘဝ)အမည်ရဝတ္ထုကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂ဝအရွယ် မော့်ရင်
(စာပေနိုဘယ်လ်ဆုရ တရုတ်စာရေးဆရာ Mo Yan)
၁၉၇၅ခုနှစ် ၂ဝအရွယ်မော့်ရင်ဟာ ဝါစက်ရုံမှာယာယီလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ အလုပ်စလုပ်ချိန်မှာ အတန်းပညာလိမ်ညာစာရင်းသွင်းခဲ့တယ်။ အလယ်တန်းအောင်လို့ဆိုခဲ့ပေမယ့် ရွာနားနီးချင်းတစ်ဦးက အဖြစ်မှန်ကိုသိသွားခဲ့လို့ သူခေါင်းမမော့နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
၁၉၇၆ခုနှစ်မှာ စစ်ထဲ မော့်ရင်ဝင်ခဲ့ပြီး စာတွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့တယ်။ ၁၉၈၄ခုနှစ် ၂၉နှစ်အရွယ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အနုပညာကျောင်းကို ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက် စာပေလောကထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။
အသက် ၂ဝအရွယ်မှာ သူတို့ဟာ ဘယ်လို စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ အခက်အခဲ၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းတွေရှိခဲ့ပါစေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ ဝေးခဲ့ပါစေ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှု၊ ဇွဲလုံ့လရှိမှုနဲ့ ဒီကနေ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို သူတို့ဆွတ်ခူးခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့လူတိုင်းမှာလည်း စိတ်ကူးအိပ်မက်က ရှိသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အဲဒီအိပ်မက်ကို မတော်မဆ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့…..
နိုင်းနိုင်းစနေ (April. 21. 2016)
← Previous Page1 … Page287 Page288 Page289 … Page302 Next →